Uphoxekile uPitso ethukwa abalandeli beSundowns - Impempe
Uphoxekile uPitso ethukwa abalandeli beSundowns
Usale ekhexile umqeqeshi we-Al Ahly, uPitso Mosimane ngemuva kokuchashwa ngenhlamba yiqeqebana labalandeli beMamelodi Sundowns. UMosimane uthi uhlangane nabalandeli beSundowns becula eceleni komgwaqo ngesikhathi beya eLucas Moripe Stadium.
Ube esecela ukuba ibhasi le-Ahly lime ukuze ezwe bathini. Bekungesikhathi beya emdlalweni wabo weCAF Champions League. Cishe ubezitshela ukuthi bazomncoma nje kwazise washiya elivusile iqembu labo walenza ompetha ayekade elifice seliyinhlekisa.
Kodwa uthike koma amathe esechashwa ngezinhlamba, kuze kufakwe nonina omzalayo lapho. UMosimane uphume eshesha enkundleni ngemuva kokuthi ezakhe ziguqise iSundowns ngo 3-1 sekuhlanganiswe imiphumela.
“Bebengithuka, befaka nomama phakathi. Ngisale ngizibuza ukuthi kanti yini enkulu ukudlula lokhu engakwenza ebekumele ngikwenzele leli qembu ukuze ngithole ukuhlonishwa,” kusho uMosimane ngemuva komdlalo.
“Kodwa ke vele kunjalo ebholeni. Ngiyamazi umuntu obecashe ngalaba balendeli, obathumilie ukuthi bangithuke. Usacaulwe wukuthi ngashiya ngahamba. Kodwa kwakufanele ngiqhubekele phambili nempilo yami.”
Uveze ukuthi kuvele kunobutha obukhona phakathi kwakhe nabathile kuleli qembu. Kuvele ukuhamba kwakhe isigubhukane kwasolisa yize ayethole umsebenzi ongcono kulezi zinkunzi zaseGibhithe.
“Kuningi nokunye, ukuthi nje angifuni ukukhuluma ngakho. Izinto engizizwile ngaphambi kokuba ngize eNingizimu Afrika… uma ngingakukhombisa ifoni yami igcwele imilayezo engiyitholile. Abafuni ukungiyeka ngikhululeke la sengikhona,” kusho uMosimane.
Previous Previous post: Iphume ngembobo yenaliti idlulela phambili iChiefs
Next Next post: BAWELILE: uHunt uthi bakwenzile okubalulekile